Links – Agent Ngapali
Activities, Links, Promotion Package Plans January 23, 2020 January 23, 2020
Ngapali Beach Special Promotions for New Year 2020…!!!
Ngapali Beach Special Promotions for New Year 2020…!!! Please do not miss chances for an unique experience ataLuxurious Accommodation of the best reasonable prices !…… ### Luxury Hotel in Ngapali Beach – Famous Hotel Ngapali ***3D /2N Packages US$ …
Thet PineLeaveaComment on Ngapali Beach Special Promotions for New Year 2020…!!!
Links, The Real Esate Rakhine, Virgin Beach March 8, 2019 June 17, 2019
New Destination of Virgin Beach at Rakhine, Burma
Activities, Links August 21, 2018 June 17, 2019
Risk Free: You can cancel later, so lock in this great price today
တံငါရွာ သို့ သွားကြမယ် နံနက်အစောပိုင် တွင် တံငါရွာသို့ သွားလည်မယ်ဆိုရင် ပထမဆုံးတွေရမှာက တံငါသည်များ ငါးဖမ်းပြန်လာတာတွေကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ငါတွေနေလှံနေတာတွေကိုလဲ တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီ သင်စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုလျှင် လက်ဆက်တဲ့ ပင်လယ်စာများ ကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ တံငါသည်များထံမှ ၀ယ်ယူလို့ရပါတယ်။ ထိုပြင် တံရွာ ဈေးတန်းထဲမှာလဲ မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပင်လယ်စာ နဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို ၀ယ်ယူလို့ရပါတယ် နေလည်ပိုင် ကျရင်လဲ ဟိုတယ်မှ စက်ဘီးများငှာလို့ရတဲ့တွက် ကမ်းခြေမှာ စက်ဘီးစီရင် ကမ်းခြေတ၀ိုက်သွားလာ ကြည့်နိုင်သလို အစားအသောက်များတွက် ပင်လယ်စာ စားသောက်ဆိုင်များကိုလဲ သွားလို့ရပါမယ် နောက်တစ်ခုက လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်များကို စိတ်ကြိုက် သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်။ …
Activities, Links August 20, 2018 June 17, 2019
Standup Paddle Board Styles Is Stand Up Paddle Boarding good exercise? As many people have heard, standup paddle boarding is the best workout foracomplete body workout. SUPing isalow impact exercise that isacombination of balance, strength, and endurance which are …
Links, Promotion Package Plans, Uncategorized July 4, 2018 January 23, 2020
Links, Promotion Package Plans, Uncategorized July 1, 2018 January 4, 2020
Travel Agent Ngapali က အထူး ပရိုမိုးရှငျး ဈေးနှုနျးလေး လုပျပေးထားပါတယျ ၁ ရကျ ၇ နှဈလ ပိုငျက နေ ၁၀ လပိုငျကုနျ ၂၀၁၈ ထိ ဖွဈပါတယျ။ နှဈညအိပျ သုံးရကျ ခရီ ကို တဈဦးနှုနျး ၆၅၀၀၀ ကပျြပါ Travel Agent Ngapali is now of Special promotional rate from 1 July 2018 to End of Oct 2018:3Day /2 Nights …
ကွိုတငျ ဘိုတငျသူမြား အထူး ဈေးနှုနျး နဲ့ ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။ လုံးဝအသဈသဈစကျစကျ Guest House မှာ တညျခိုးခှငျ့ရမှာဖွဈပါတယျ*** ၁ ည (သို့)၂ ညအိပျ ငပလီခရီးစဉျ*** အပနျးဖွအေနားယူခငျြသူမြား၊ ခရီးသှားရတာကိုနှဈခွိုကျသူမြားနှငျ့ ပငျလယျပွငျမှာ အပြျောတမျး ခရီးစဉျ ထှတျလိုသူမြား တှကျ ပငျလယျပွငျမှာ ငါးမြှားမယ၊ျ ရကေူးမယျ ၊ ရငေုပျမယျ၊ အလှဆုံးသော ဓါတျပုံတှရေိုကျကွမယျ ခရီးစဉျကတော့ ကားနဲ့ “သံတှဲ ဈေးမှ” လကျဆောငျပစ်စညျးမြားဝယျ ကွမယျ မွကျစှာဘုရား ဗြာဒိတျပေးထားသော မွကျစှာဘုရား ရဲ့ ဓါတျတျောမှေးတျောမြား ဌာပနာထားသော “တနျခိုးကွီး ဘုရားသုံးဆူ” နဲ့ …
FESTIVALS, Links, Promotion Package Plans, Uncategorized May 7, 2018 August 7, 2018
3 D / 2N Packages
Dear Valued Guest Warmest greeting from Travel Agent Ngapalil!Special Big PromotionPlease do not miss chances for an unique experience ataLuxurious Accommodation of the best reasonable prices !……3 D / 2N PackagesPackages include;*Accommodation at3Star Hotel or Lodge with Activities*Flight Tickets or Bus …
Thet PineLeaveaComment on3D / 2N Packages
Links, Promotion Package Plans, Uncategorized May 6, 2018 June 17, 2019
Land and River Trip : The first trip will be leaved from The Ngapali with by Car to Thandwe market around sightseeing and Leave the Thandwe market forward to Zalun Monastery where there isahistory ofa1 dead monk body about 32 years …